Warshad SILSILADA HARDWARE - Shiinaha SOO SAARKA SILSILADA SOO SAARKA, Soo-saareyaasha
NACM2010 FASALKA 80 SILSILADA ALLOY
La kulan tilmaamaha ugu dambeeyay ee Ururka Soosaarayaasha Silsiladda Qaranka (NACM)
Silsilad guud oo koronto oo loogu talagalay beeraha, warshadaha iyo codsiyada guryaha.
Waxyaabaha: birta kaarboonka yar
Lagu dhejiyay "RG30"
Cunsurka naqshada 4: 1
Is-midab dhammayn, dhammayn zinc ah, dhammayn kulul galvanized dhammayn
DIGNIIN: HA dhaafin XADKA SHAQADA SHAQADA!
MA AHAN GUULEYNTA DUULKA
SILSILADDA MAKIINADDA NACM2010
Xidhiidh gaaban, oo badanaa loo isticmaalo irdaha dabada, qalabka beeraha iyo qalabka warshadaha
INCH SIZE CAD CARRUUR AH MILMAHA SILSILKA GAABAN LINK
Silsiladda caadiga ah waxaa laga soosaaray bir bir ah oo kaarboon ah oo heerkeedu hooseeyo lagana heli karaa cabbirro xiriirro kala duwan ah. Ku habboon codsiyada kala duwan ee warshadaha wax soo saarka, badda iyo beeraha. Silsiladda caadiga ah waxaa la siiyaa iyada oo aan la tijaabin lagana shaabadeyn xalka ugu dhaqaalaha badan ee ujeeddooyinka guud ee kala duwan.
SILSILKA SHAQADA GAABAN EE AUSTRALIA
Silsiladda xariirka gaaban ee Australian Standard waxaa laga soo saaray bir bir ah oo kaarboon heerka hoose ah waxaana laga heli karaa cabirro xiriir ah oo kala duwan. Ku habboon codsiyada kala duwan ee wax soo saarka, warshadaha badda iyo beeraha, noocyadan kala duwan ee silsiladda waa caddeyn la tijaabiyey ugu yaraan laba jeer culeyska ugu badan ee lagula taliyay isticmaalka caadiga ah.
DIN5685A / C (SEMI LINK LINK / LINK LINK) SILSILAD
DIN5685A (NEW DIN 5685-2) SEMI LINK LINK LINK DHEER
Si loo isticmaalo guud ahaan meesha iswaafajinta iyo dabacsanaanta dheeriga ah la doonayo. Waxaa lagu heli karaa isku xirnaanta toosan iyo leexashada. Waxaa guud ahaan loo isticmaalaa codsiyada guryaha iyo qalabka beeraha.
DIN5685C (CUSUB DIN 5685-1) SILSILKA LINK DHEER
Adeegsiga waxaa ka mid ah silsiladaha xayawaanka lagu xiro, silsiladaha lagu hirgeliyo beeraha, carqaladda ama silsiladaha ilaalinta.
Xidhiidh toosan iyo iskuxidhka qalooca ayaa labadaba la heli karaa
INCH SIZE CILMI CAADI AH SILSILADDA SILSILADA DHEER LINK
HEERKA AUSTRALIYA OO SILSILO LINK LINK DHEER
ASTM80 GRADE43 SILSAN SARIIR SARE
Buuxiyo dib u eegistii ugu dambeysay ee qeexitaanka ASTM A413
Loogu talagalay in loogu isticmaalo xamuulka xamuulka, jiidaya, goynta iyo codsiyada kale
Waxyaabaha: Kaarboonka birta ah
Lagu dhejiyay "RG43"
Cunsurka naqshada 3: 1
ASTM80 FASALKA 30 CADDAYNTA SILSILADA SILSILADA
SILSIGA Mashiinka NACM2010 - LINK toosan
SILSIGA MAKIINADDA NACM2010 - LINKKA LAGA
NACM2010 SILSILADDA XARIIRKA DHALINTA
Naqshad ballaadhan ayaa u oggolaanaysa isku xirnaanta inay midba midka kale si xur ah u dhaafto, waxay baabi'isaa u janjeeridda ilmo ama gunti
Adeeg guud oo ku saabsan beeraha iyo warshadaha.
Silsilad xamuul ahama oo bir ah oo loogu talagalay Sewag, G80 Alloy Steel Gaadiidka qaadista silsilad silsilad, Silsiladda Gaaban ee Marin, G80 Qaadista Chain Fasalka 80 Chain Daawaha, Alloy silsilad qaadista, Qaadista Mashiinnada Mashiinka Shisheeyaha,